ဆိုင်းဘုတ်တွဲစာရင်း :3- sign in china
ဘာသာစကားရွေးချယ်ပါ။ အင်္ဂလိပ် Português Русский Español Français Deutsch Italiano العربية နယ်သာလန Ελληνικά עברית 日本語 한국의 Polski ไทย Türkçe Tiếng Việt USD - $ MMK - BUK
Tel：+95 9891233519/9692144423 Dirección：No.42 ,Coner of South Okkalapa No.2 Industrial Road and Sattmu4Road, South Okkalapa Township, Yangon
ခြင်း0အမျိုးအစား(များ)
Engraving Machine Parts
POP and Exhibit Displays
ကြော်ငြာနှင့် ဆိုင်းဘုတ် ကိရိယာ
ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက်နှင့် အထောက
ကြီးမားသော ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက် ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ထုတ်စက် အလံပြုလုပ်သောစက်
Laminate ပြုလုပ်သောစက် နှင့် အချောသတ်ကိရိယာ
ပလတ်စတစ်အုပ်စက် [Buying Guide]
အိတ်အုပ်စက် ပုံနှိပ်စက်အတွက် ထပ်တိုးကိရိယာ ဗီနိုင်း ဘန်နာ ခွဲစက်နှင့်ဂဟေဆပ်စက် အလှည့်ကျဖြတ်သောစာရွက်အစဖြတ်စက် ရော်ဘာကွင်းထုတ်စက် X/Y Digitrim Automatic Cutter Digitrim Automatic Cutter Spare Parts Ulttrasonic ဖုန်စုပ်စက်
အ၀တ်အစားများသို့တိုက်ရိုက် DTG မှင်နှင့် အထောက်အပံ့
စာတန်းထိုးပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် ဖြတ်စက်ဖြေရှင်းချက်
စာတန်းထိုးပုံနှိပ်ခြင်း နှင့် ဖြတ်စက်
Pad Printing Machine ပုံပန်းလှစေသောပုံနှိပ်ခြင်း အကူကိရိယာများ
CO2 လေဆာပုံထွင်းစက်နှင့်ဖြတ်စက် လေဆာအမှတ်ပြုလုပ်သောစက် ဖိုက်ဘာ လေဆာသတ္တုဖြတ်စက် လေဆာဂဟေဆက်သောစက် CNC ပုံထွင်းစက်နှင့်လှည့်စက် Flatbed Digital Cutter Engraving Blanks
ရေစုပ်စက်နှင့် ရေတက်စက် [Buying Guide]
အောက်စီဂျင်၊ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဂဟေဆက်ပေးသောမီးတောက်အရော [Buying Guide]
Channel စာလုံးပြုလုပ်သောစက် အလိုအလျောက် သတ္တုစာလုံးကွေးစက် Channel စာလုံးပစ္စည်း အက်ခရီလစ် အချောသတ်စက် Metal Profile Making Machine
စိန် အက်ခရီလစ် အရောင်တင်စက်
Pneumatic/Automatic Screen Printing Press မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ကိရိယာအစုံအလင် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော စက် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော အကူပစ္စည်းကိရိယာများ Flash Dryers Exposure Unit Dip Tanks And Dark Room Stretchers Screen Racks And Carts
တီရှပ်အပူဖိစက် ကြီးမားသောပုံစံရှိသောအပူဖိစက် မတ်ခွက်နှင့် ပန်းကန်ပြား အပူဖိစက် Combo အပူဖိစက် 3D လေဟာနယ်အပူဖိစက် အပူဖိစက်အားနှိုးရန်ကိရိယာအစုံအလင် အပူဖိစက်အစိတ်အပိုင်းများ တံဆိပ်ပြုလုပ်သောစက် အခဲအငွေ့ပျံဗြောင်များ အခဲအငွေ့ပျံသော မှင် အပူရွှေ့ပြောင်းသော ဗီနိုင်း တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်သော အထည်သား Fabric Face Mask
Desktop ဓာတ်ပုံ Epson ပုံနှိပ်စက်
Seiko ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Konica ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Spectra ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Xaar ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Epson ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Roland ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Mimaki ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Mutoh ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Canon ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Encad ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း HP ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Ricoh ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း Toshiba ပုံနှိပ်စက်ခေါင်း
ဆိုင်းဘုတ် က်ိရိယာအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်
Maintop RIP ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပုံထွင်းခြင်းနှင့် လှို့ဝှက်ကြံစည်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်
Polar 1850A / 1950A ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ C4 / C8 ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Infiniti / Challenger / Phaeton ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Galaxy ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Crystaljet ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ XLF / XKD ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Nocai ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ DTF ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Xuli ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Konica ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Epson ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Roland ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Mutoh ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Mimaki ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Canon ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Old Hp ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Brother ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Locor ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Allwin ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Atexco ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ DGI ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Flora ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Fortune lit ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ
Gongzheng / GZ ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Human ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Icontek ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ JHF ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Liyu ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Myjet ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Ricoh ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Seiko ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Skycolor ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Teckwin ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Videojet ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Wit-color ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ XENONS ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Yongli ပုံနှိပ်စက်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Zhongye ပုံနှိပ်စက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ H-E အစိတ်အပိုင်းများ
အလကားပေးသော ဒေါင်းလုခ့် USB Drivers
ဒေါ်လာ ၂၀၀၀နှင့်အထက် ပို့ဆောင်မှုအလကား
Fabric Face Mask အခဲအငွေ့ပျံသော စက္ကူ & Heat Transfer Paper အပူရွှေ့ပြောင်းသော ဗီနိုင်း တံဆိပ်များနှင့် ကြယ်သီးများ တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်သော အထည်သား အခဲအငွေ့ပျံဗြောင်များ အခဲအငွေ့ပျံသော မှင်
မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ကွန်ယက် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ဖလင်နှင့် ညှစ်ထုတ်ပေးသော မှ မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ဘောင် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ဗြောင်များ
ဖြတ်ထားသော တစ်ကိုယ်ရည်စေးကပ်သော ဗီနိုင်း ရောင်ပြန်ပိတ်စ
Laminate ပြုလုပ်ထားသော ဖလင်
အအေးဖြင့် ပလတ်စတစ်လောင်းထားသော ဖလင် အပူဖြင့် ပလတ်စတစ်လောင်းထားသော ဖလင် ပလတ်စတစ်အုပ်ထားသော ဖလင်အိတ်
အခဲအငွေ့ပျံသော မှင် DTG မှင်နှင့် အထောက်အပံ့ တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်သောမှင် အီကို မှင်နှင့် အတောင့်များ ရေအသုံးပြုမှင်နှင့် အတောင့် (ဆိုးဆေး နှင့် ခြယ်ဆေး ပျော်ရည်အသုံးပြုသော မှင် UV မှင်
အပြင်ပိုင်း မှင်စက်ကလေးများနှင့်ပုံနှိပ်သော မီဒီယာ
တစ်ဖက်တွင်ကပ်ရန်ကော်ပါသော ဗီနိုင်းဖလင် ( သွားလာရေး တစ်လမ်းတည်းအမြင် PVC ရွှေ့ရလွယ်ကူသော အောင်တံခွန် ဇာကွက်အုပ်ထားသော အထည်သား
အတွင်းပိုင်း မှင်စက်ကလေးများနှင့်ပုံနှိပ်သော မီဒီ
Fabric & Textiles for Displays PET မှင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံနှိပ်သော ဖလင် မှင်စက်ကလေးများဖြင့်ပုံနှိပ်သော ပတ္တူစ ဓာတ်ပုံရွက် PP Film
Channel စာလုံးပစ္စည်း Channel Letter GlueChannel Letter Glue and Adhesiv
Engraving Blanks အက်ခရီလစ်ဘုတ်ပြားများနှင့် အရွက်များ PVC ရော်ဘာဘုတ်ပြား ABS အရောင်နှစ်ထပ်ပါသော အရွက် ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်ခြင်းဗြောင်မျ ပြားပြားရှည်ရှည်ပုံစံရှိသော ပုံနှိပ်စက် အထောက်အပံ့ 3D Printer Supplies Corrugated Plastic Sheet
POP နှင့် ခင်းကျင်းပြသမှုများ
Tower Display Show Case
လိပ်တင်၍ရသော အောင်လံတံခွန်တိုင် L&X အောင်လံတံခွန်တိုင် ကျောပိုး အောင်လံတံခွန် ပိုစတာပြသမှု ထောက်တိုင် အီကို ၀ါး အောင်လံတံခွန်ပြသမှု အပြင်ဘက်အာင်လံတံခွန်ပြသမှုများ ဖိုက်ဘာ ဂရပ်ဖစ်အောင်လံတံခွန်များ စားပွဲထိပ်အောင်လံတံခွန်
အီကိုခေါက်၍ရသော LED စာမျက်နှာပြသမှု
လက်ကမ်းစာစောင်ကပ်တိုင် Ipad နှင့် တီဗီကွင်း A3/A4 ဆိုင်းဘုတ် ထောက်တိုင်များ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ဖြတ်စက်အသေးစား စွပ်စရာ
ပြသမှုအတွက် LED အလင်း
အရွယ်အစား၊ညွှန်ရပ်ကိုဖော်ပြသည့် ပမာဏပြ ကားချပ်အားေ
LED Display Moudle LED ပြသမှုနှင့် သီးခြားယူနစ်ဘုတ်ပြား LED Gas Station Sign
LED စွမ်းအား အထောက်အပံ့
LED ထိန်းချုပ်သောခလုတ်များနှင့် မီးမှိန်ခလုတ်များ
အတွင်းပိုင်း အလှဆင်မီး အပြင်ပိုင်း အလှဆင်မီး
LED ကြော်ငြာပေးသော အလင်း
ထိန်ထိန်လင်းသော မီးရောင် LED ချောင်း မီးလုံးပါသောမီးအိမ် စင်တင်မီးရောင်များ နံရံဆေးအလင်း မြေအောက်အလင်း ရေအောက်အလင်း
အတွင်းဘက် အပေါ်အောက်ဆွဲပြသော ဆိုင်းဘုတ်
ဓာတ်ပုံစာအုပ် အသုံးအဆောင် ပြီးပြည့်စုံသော စာအုပ်ဖုံးစက် စာအုပ်အဖုံးအမာ ချုပ်စက် လျှပ်စစ်သုံး စက္ကူဖြတ်စက် ခဲစာလုံးများမှပုံနှိပ်ယူသောစက် ဘီး ချည်သောစက် ဘေလ်ချုပ်သော စက် စာအုပ်အဖုံးချုပ်သော အထောက်အပံ့များ
စာအုပ်ပုံနှိပ်စက် ပူးတွဲပုံနှိပ်စက် စာရွက်ခေါက်စက်
လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်းဘုတ်များ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဈေးနှုန်းတွဲကတ်ကလစ်များ Social Distancing Supplies ပြတင်းပေါက် ဒီကယ် ပိန်သွယ်သော LED အလင်းဘူး အက်ခရီလစ် ခရစ်စတယ် အလင်းဘူး လှည့်၍ရပြီး အပေါ်အောက်ဆွဲ၍ရသော အလင်းဘူး
၀ယ်ယူသူစိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်ထားသော တံဆိပ်များနှင့် အ
အလင်းဘူးအတွက် အလူမီနီယမ် ကောက်ကြောင်းပုံ
ပိန်သွယ်သော LED အလင်းဘူးအတွက် အလူမီနီယမ် ကောက်ကြော လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးသွယ်တန်းထားသော LED အလင်းဘူးအတွက်
မှာယူသူစိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်ထားသော ဒီဂျစ်တယ်အခဲအငွေ့ပျံ ပုံနှိပ်ခြင်း
Laser Tube and Frame Optic Lens Mirror or Mounts Power Supply Laser Controller Laser Mechanical Parts ဖိုက်ဘာလေဆာစက် အပိုအစိတ်အပိုင်းများ CO2 လေဆာပုံထွင်းစက်အတွက် အစိတ်အပိုင်းများထည့်သွင်း
CNC ပြားပြားရှည်ရှည်ရှိသော ဖြတ်စက်အတွက် အပိုအစိတ်အ ကိရိယာကိုင် ညှပ် CNC Engraver Parts
ပြားသောသို့မဟုတ် အချင်းဝက်မျဉ်းမှတိုင်းတာထားသော ပြားသော သို့မဟုတ် တစ်ဝက်တန်းသော ပုံထွင်းသော Bit မျ အောက်ခြေသန့်ရှင်းသော Bit များ မိုဘိုင်းဖုန်းဘောင်ကွက်အတွက် ပုံထွင်း Bit များ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သစ်သားသုံးအလုပ်များအတွက် သက်သာေ ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သစ်သားသုံးလုပ်ငန်းများအတွက် Bit ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သစ်သားသုံးလုပ်ငန်းများအတွက် အထူ သစ်သားသုံးလုပ်ငန်းများအတွက် Bitများဖြတ်ခြင်း ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သစ်သားသုံးလုပ်ငန်းများအတွက် Cha သတ္တုအတွက် အဆုံးသတ်ကြိတ်စက်များဖြင့် ကြိတ်ခြင်း ပုံထွင်း ဖြတ်စက်ဗြောင်များ သတ္တုပုံစံခွက်အတွက် ပုံထွင်း Bit များ ကျောက်တုံးအတွက် ကြိတ်သော Bit များ
မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ရော်ဘာကွပ်လက်ကိုင်ပါဝင်သောက မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော ပန်းကန်ပြားအပြား မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သော အထောက်အပံ့များ
Vinyl Banner Glue and Double-Sided Tape ရော်ဘာကွင်း ထောက်တိုင်မပါသောပစ္စည်းများ ID ကတ်ပြားထည့်ရန်အပေါက်ဖောက်ရန် အပေါက်ဖောက်စက်နှင် ဖျာဖြတ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာထားသောကာကွယ်ခြင်းပေတံ လက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသုံးဝင်သောဓားနှင့် အက်ခရီလစ်ချိတ လျှပ်စစ်ဓာတ်သွယ်တန်းသည့် ကြိုးဖြင့်သွယ်ထားသော အောင တံဆိပ်များ ဓာတ်ပုံ ရုပ်ပုံ ဖြတ်စက် ပစ္စည်းကိရိယာများ
ပင်မ > ဆိုင်းဘုတ်တွဲစာရင်း >3
တွဲတင်ထားသောပုံများ စာအရ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z01234567 8 9
အထူးကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် အီးမေးလ်အား ၀င်ရောက်ရန်အကောင့်ဖွင့်ပါ။
ပစ္စည်းများအလကားနှင့်ငွေသားဆုများရရှိရန် မြင့်တင်မှုများ၊ လျှော့ဈေးများနှင့် အထူးကမ်းလှမ်းမှုများအားရယူပါ။
ထုတ်ကုန်အတွဲများ : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z01234567 8 9
www.Sign-in-Myanmar.com. It is the biggest online supplier of sign products in Myanmar and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in6foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards asaresult that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.